China China uhp inogide conductivity graphite electrode factory na suppliers | pụọ Energy
Graphite agba / Bushing
Graphite n'ise & Mkpụrụ
Graphite mpempe akwụkwọ & Akwụkwọ
Graphite electrode & nipples, ezi price edm gr ...
Graphite amị maka lubrication
Graphite rotor vane maka mgbapụta
Solar graphite Boat maka Pecvd
China uhp inogide conductivity graphite electrode
Ngwa: eji na EAF ma ọ bụ LF, EAF / LF
Ọkwa: UHP (Ultra High Power)
O njupụta (g / cm³): 1.66-1.74
Flexural Ike (N / ㎡): > 8 Mpa
Ọnụ ara Type: 3TPI 4TPI 3TPIL 4TPIL
Ekwe ike: 10.0-16.0Mpa
Ebube: Low Oriri Rate
Raw ihe: mmanụ ala Coke na agịga Coke
Eguzogide (μΩ.m): 4.5-6.2μΩ-m
Kwes Mgbasawanye: 1.5-2.9
Ash ọdịnaya: 0.3% max
Ihe: 100% dị agịga Coke
Nnukwu njupụta: 1.66-1.74g / cm3
Na-agbanwe MODULUS: 14 Gpa max
graphite electrode ka nke elu mma calcined mmanụ ala Coke, dị agịga Coke na gbanwetụrụ coal korota, na ọkwa RP, HD (impregnation), HP na UHP graphite electrodes, nkọwapụta bụ Ø75-700mm.
Graphite electrode mepụtara anyị ụlọ ọrụ nwere uru nke ala resistivity, elu eletriki conductivity na thermal conductivity, ezi ọxịdashọn eguzogide, ezi kwes ujo na-eguzogide, elu n'ibu ike, mfe igwe, etc.
Graphite electrode na ọtụtụ-eji na smelt nchara, alloy nchara na ndị ọzọ metal ma ọ bụ nonmetal ihe na electric aak ọkụ.
Anyị ahịa bụ isiokwu ịgbanwe na ọkọnọ na ndị ọzọ ahịa ihe. Anyị ga-ezitere gị na-emelite price list mgbe gị na ụlọ ọrụ kpọtụrụ anyị maka ndị ọzọ.
N'ihi na n'omume, na-edu ndú oge bụ banyere 7 ụbọchị. N'ihi na uka mmepụta, na-edu ndú oge bụ 15-25 ụbọchị mgbe na-anata ego ugwo. The ụzọ ụfọdụ, irè mgbe anyị natara gị ego, ma na anyị nwere ikpeazụ unu ihu ọma gị ngwaahịa. N'ọnọdụ nile anyị ga-agbalị nabata gị mkpa. Ọtụtụ mgbe anyị na-enwe ike ime otú ahụ.
Next: Ezi mma factory price graphite electrode 600mm
Hot-ere china graphite electrode manufactur ...
Graphite electrode Njirimara / mmepụta / akpali ...
Graphite electrode HP n'ihi na ígwè osisi n'oké
Nke 777, Zhongguan West Road, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang, 315201, China
graphite Electrode, graphite efere, graphite Crucible, graphite Block, graphite akpụzi, graphite chere,